Sekota: Otu esi choputa SEO Agency kacha mma
Ịnwere ike kachasị ike iji mee ụfọdụ ọrụ SEO maka weebụ gịọdịnaya nwere ike ịbụ ihe ịma aka. E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ekwe nkwa ime ọtụtụ, mana nkwa ndị a anaghị ekwe nkwa ịzọpụta gịnsogbu ndị ọzọ
Mgbe ị chọrọ Search Engine njikarịcha maka ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụọdịnaya, ị ga-achọ ịnweta otu ndị ọkachamara inyere gị aka ịrụ ọrụ dị iche iche, nke nwere ike ọ gaghị adị mfe. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ị nwere ikemee mkpebi ọjọọ mgbe ị na-ahọrọ SEO siri ike ịrụ ọrụ gị.
Nik Chaykovskiy, ọkachamara na-ahụ maka Ọkachamara Ọrụ Ntanetị na-akọwa njirisi ị kwesịrị ịgbaso mgbe ị na-ahọrọ ụlọ ọrụ SEO.
Onyeikpe site n'ile anya na weebụsaịtị
Otu n'ime ụzọ ziri ezi ị ga-esi chọpụta ọkwa ọkwa nkeike bụ site n'ile anya na ebe nrụọrụ weebụ ya. Ọ bụrụ na SEO ụlọ ọrụ na-ekwe nkwa magburu onwe ya pụta, ha nwere ike hụrụ na ha na ebe nrụọrụ weebụ. Ebe kwesịrịgosipụta ahụmịhe ahụ, ọkwa nke mkpocha ọrụ na iji usoro SEO eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị
Nyochaa ikike ụlọ ọrụ
Otu nnukwu ụlọ ọrụ na-apụtaghị na ha na-eme haSEO dị mma karịa ụlọ ọrụ dị nta na ndị ọrụ ole na ole. Ọ bụ ihe amamihe dị na ịtụle ihe ndị ọzọ dị egwu ga-enye gịnghọta na arụmọrụ siri ike..
Hụ iche na nchọta ọchụchọ
Echere na nsonaazụ kachasị na-enyocha ọchụchọ ogo search enginena-enye ụlọ ọrụ ndị ị chọrọ n'ezie. Algorithm nyocha na-eji ọtụtụ ihe na-ekesa ọnọdụ ọchụchọ. N'ihi ya,ọ bụghị ọrụ kachasị elu nke ụlọ ọrụ na-enye ọrụ ị chọrọ n'ezie.
Kpebie ihe dị mkpa SEO
Kọwaa ihe akụkụ nke SEO chọrọ nhazigharị. SEOgụnyere ọtụtụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, iwepụ njikọ, njikwa aha, jikọta ụlọ, retargeting, njikwa PPC, ahịa ọdịnaya,SEO nyocha, SEO na-aga n'ihu, wdg. Kpebie ihe ubi ị kwesịrị ilekwasị anya na ịchọta ike nke nwere aha kachasị mma n'igosi ha.
Gwa ọtụtụ ndị ọkachamara
Ọtụtụ ụlọ ọrụ achụmnta ego nke SEO ga-eji obi ụtọ gbalịa ịmasịonye ahịa na-agwa ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enwe ike ịba uru mgbalị gị. Ịgwa ndị ụlọ ọrụ ndị a okwu nwere ike inyere gị akaiji nweta ezigbo nyocha na ọmụmụ ihe ị nwere ike ịkọ.
Mgbe ị na-achọ ụlọ ọrụ SEO kasị mma, ọ dị mkpagee ntị na akụkọ ha dị njikere ịkọrọ. Ezi SEO na-ama ndị ahịa ha aka site n'ichepụta usoro. Inye akụkọ bụ otunke usoro ihe omuma kachasị ọhụrụ nke na-enyere onye ahịa ọhụrụ aka ịmepụta onyinyo nke echiche SEOike. Ozugbo ị mụtara ikemịhe ahịa nke ụlọ ọrụ siri ike, ị nwere ike ịtụle nke a dịka onye ahụ.
Inwe ihe doro anya, na ịchọta ọtụtụ ụlọ ọrụ, nyochaaọdịnihu dị iche iche n'ọdịnihu, na ịge ụfọdụ akụkọ sitere n'aka ndị ọkachamara SEO nwere ike inyere gị aka ịchọta onye otu SEO chọrọ. Tụlee ihe dị icheihe ma mụta ihe banyere SEO ọrụ ị nwere ike mkpa Source .